Barlanaanka J/Land oo Waqti dheer siiyay A/Madoobe | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Barlanaanka J/Land oo Waqti dheer siiyay A/Madoobe
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa mar labaad Barlamaanka Jubbaland ka codsaday inay u kordhiyaan xiliga u ku soo magacaabayo Galihiisa Wasiirada cusub, maadaama shirar iyo shaqooyin badan ay jiraan.
Bashiir Maxamed Bahaale oo ka tirsan Baarlamanaka Jubbaland ayaa Xildhibaanada u akhriyay codsiga uu Madaxweynaha uu soo gudbiyay Baarlamaanka, waxaana codsiga madaxweynaha kamid ahaa in Xildhibaanadu ay siiyaan wakhti dhan 90 cisho (Sadex bilood) inuu ku soo magacaabi doono wasiirada cusub.
Xildhibaanada Ayaa 63 Mudane oo kamid ah ay ku codeeyeen haa halka 7 xildhibaan ay diideen 5 Mudane oo kalane ay ka aamuseen, waxaana natiijada codbixinta ku dhawaaqay Gudoomiyaha Baarlamaanka Jubaland Sheekh cabdi.
Sikastaba waa markii sadexaad ee Baarlamaanka Jubaland ay waqti kordhin u sameeyaan Madaxweyne Axmed Madoobe mudada uu Kusoo magacaabaayo golihiisa wasiirada, 5ta bisha soosocota ayeyna ku egtahay waqtiga horay loogu kordhiyay Axmed Madoobe Inuu Kusoo magacaabo golihiisa wasiirada.
Dib u dhacayada ku yimid magacaabida wasiirada Jubaland Ayaa taxliiliyayaasha siyaasadda waxay ku sheegaan iney tahay culeysyo badan oo Sheekh Madoobe ka haysata dhinacyo kala duwan, Tiiyoo ay dheertahay in hogaamiye Madoobe ay beesha Caalamka u sheegatay Inuu un wax soo dhisi karo xilli uu wada qanciyo mucaaradka Maamulkiisa oo Aysan suuragal aheyn waqtiga hada dib loo doortay iney kaga lunto sidii horay waqti ay kaga luntay ookale.